सरकारले लागू गर्न नसक्ने, मिडियाले नटेर्ने कानुन के काम? बरु फाल्दिए भयो नि त ! – MySansar
सरकारले लागू गर्न नसक्ने, मिडियाले नटेर्ने कानुन के काम? बरु फाल्दिए भयो नि त !
Posted on November 13, 2020 November 13, 2020 by Salokya
आजका पत्रिकाहरु हेर्नुभयो भने नेपालको कानुनले निषेध गरेको विज्ञापन प्रशस्त देख्न पाउनु हुनेछ। विभिन्न मिडिया हाउसका दैनिक अखबारहरुमा मदिराको विज्ञापन छ्यापछ्याप्ती छ।
ती विज्ञापन गैरकानुनी किन हुन् भने २०७५ असोज २ गते प्रमाणीकरण भएर लागू भइसकेको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ४५ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ।
दफा ४५ मा जनस्वास्थ्यलाई प्रभावित पार्ने विज्ञापन तथा प्रचार प्रसारमा निषेधको व्यवस्था छ।
यसको उपदफा (१) मा मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सूर्तिजन्य पदार्थ लगायतका मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन लेखिएको छ।
अर्थात् मदिराको विज्ञापन बनाउन, वितरण गर्न र प्रचार प्रसार गर्न यो ऐनले बन्देज लगाएको छ।
यो ऐन बन्नुभन्दा अघि इलेक्ट्रोनिक मिडियामा मात्र बन्देज थियो। तर यो ऐनले भने ‘कुनै पनि विज्ञापन सामग्री’ भनेर सबैलाई समेटेको हो।
तर आजको पत्रिकाको ताल हेर्नुस्। (विज्ञापनलाई धमिलो चैँ मैले बनाएको हो है)
आजको कान्तिपुर। यसमा सानो विज्ञापन छ। तर काठमाण्डु पोस्टले भने ज्याकेटै लगाएको छ-
काठमाण्डु पोस्टको भित्री पेज।
आजको नयाँ पत्रिकाको अन्तिम पेज।
आजको दि हिमालयन टाइम्सको भित्री पेज।
अर्थात् विज्ञापन छाप्ने कान्तिपुर, द काठमाडौँ पोस्ट, नयाँ पत्रिका आदिलाई मुद्दा लाग्न सक्छ र त्यसमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनसक्छ। तर कसैले शक्तिशाली मिडियाविरुद्ध यस्तो मुद्दा लगाउने आँट गर्न सक्लान् त?
तिहारको बेला भएकोले मदिराको विज्ञापन पत्रिकाका पानाहरुमा पोखिएको होला। कोरोना कहरमा आर्थिक समस्यामा परिरहेका मिडियाहरुलाई यसले राहत पनि भयो होला। बनाउन सरकारले लाइसेन्स दिने तर विज्ञापन गर्न नपाउने ? यसो भनेर प्रश्न त गर्न पाइयो। तर त्यस्तो प्रश्न गर्नेहरुले बुझ्नु पर्ने के हो भने देशको कानुन भनेको त कानुनै हो नि। यसको पालना त हुनुपर्‍यो नि।
सरकारले लागू पनि गर्न नसक्ने अनि मिडियाले पनि नटेर्ने कानुन त किन राखिराख्नु र। बरु अहिले संसद नबसेको भएर अध्यादेशै ल्याएर फाल्दिए भयो नि त। कानुनमा निषेध पनि गर्ने अनि खुल्लमखुल्ला त्यसको उल्लङ्घन पनि गर्ने त सुहाएन है सुहाएन। बरु मुद्दा चलाएर १० हजार रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीमा जम्मा गरेर कारबाही गरे जस्तो देखाइदिए भयो नि। त्यति पनि आँट गर्न नसकेको हो त सरकारले ?
मिडिया र मदिराको कुरा गर्दा एउटा पुरानो सम्पादकीय जहिले पनि राखिहाल्न मन लाग्छ। अहिले पनि छुटाउन मन लागेन।
अब यो विज्ञापन कानुन विपरीत भए पनि तर्क त त्यही २०५३ सालको सम्पादकीय जस्तै त गर्ने होला नि- वास्तवमा मदिरा आफै खराब वस्तु पनि होइन ?